मनपर्ने अभिनेता। "हावामा किला" - ब्राजिलियन टिभी श्रृंखला
ब्राजिलियन धारावाहिक देर नब्बे को दशक मा हाम्रो जीवन को भाग भएका छन्। यसलाई सक्रिय मजा र रोमाञ्चक telenovelas देखाउन समय थियो। त्यतिबेलादेखि धेरै समय स्थिति देशमा परिवर्तन भएको छ, पारित गरेको छ, तर मनपर्ने वर्ण स्मृति थिए। बीस वर्ष पहिले - कहिलेकाहीं तपाईं पन्ध्र हाम्रो मन कब्जा त्यो पुरानो चलचित्र पुनर्विचार गर्न चाहन्छु। हामी अभिनेता के सम्झना? दुई thousandth गरेको को सुरुमा धेरै लोकप्रिय थियो कि एक श्रृंखला - "हावा मा किला"। आफ्नो धेरै अझै पनि खुशी र केही सम्झनाहरु संग सम्झना। छैन शायद एक ब्राजीलियाई टिभी श्रृंखला बारे केहि सुनेको थियो छैन जो छ मान्छे "हावा मा किला।" अभिनेता र भूमिकाको यस लेखमा प्रस्तुत छ।
सौन्दर्य जूलिया मनटाना indifferent जो कोहीले छोड्न सकेन। त्यो Otavio मनटाना, एक सफल पत्रकार को जेठो छोरी छ। केटी समय र प्रयास को धेरै आफ्नै शीर्ष जित्न, एक व्यक्ति बन्न, जीवन धेरै सफलता मा हासिल गर्न बाहिर राखे। उनले पछि पछुताउनु केहि छैन भनेर आफ्नो गतिविधिहरु, राम्ररी व्यवस्थित गर्न सक्षम छ, बलियो अक्षर छन्।
जूलिया आत्म-पर्याप्त र बलियो बालिका को छाप दिन्छ, तर मेरो हृदय मा - नरम र अलिकति अनुभवहीन। त्यो सायद, सबै भन्दा अधिक कास्ट बाँकी सम्झना। "हावामा किला" - तपाईं यसलाई केहि मजा र रोचक पाउन endlessly हेर्न र सधैं गर्न सक्ने एउटा शो।
एक फिल्म मुख्य वर्ण को। उहाँले अन्य अभिनेता साथै दर्शक सम्झना। "हावामा किला" बिना चरित्र मार्कस Palmeira त रोचक हुन थियो। चिको Mota - शो को आत्मा हो। उहाँले, हास्य को एक inexhaustible अर्थमा छ अक्सर हास्यास्पद परिस्थिति मा हुन्छ।
चिको Zhuliyu सरोष प्रेममा, तर यो आफैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। उहाँले गल्ति आफ्नो भावना discovers भने, त्यसपछि कमजोर र कमजोर भन्ने महसुस। आफ्नो सहभागिता संग श्रृंखला केही अंक धेरै नाटकीय र अस्पष्ट हुन थाल्छ।
Otavio मनटाना - परिवार को पिता। अठार वर्ष पुरानो, उहाँले एक coma मा, जीवन र मृत्यु बीच छ थियो। लामो सुतेपछि उठ्दै, म आफ्नो स्मृति हराउने र अब आफ्नो निकटतम नातेदार पाउन सक्दैन, र आफ्नो पूर्व आत्म को सबै भन्दा फेला परेन। यसैबीच, आफ्नो छोरी माथि भयो, तर उहाँले तिनीहरूलाई सम्झना छैन। हव्वाले - - एक भयंकर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो Otavio पत्नी भनेर थाहा छैन। बिस्तारै, स्मृति उहाँलाई लाभ, र उहाँले नजिकको साथी र भाइ हुन pretended गर्ने एक, वास्तवमा धूर्त हत्यारा हो भनेर बुझ्न सुरु हुन्छ। वर्ण मार्क Nanin रोचक र हृदयस्पर्शी गरे। आफ्नो childlike उहाँले अन्य अभिनेता भन्दा बढी रिश्वत। विश्वभरिका लाखौं मानिसहरू को मनपर्ने एपिसोड - "हावा मा किला"।
यो अभिनेत्री ब्राजिलियन telenovelas सबै प्रशंसक थाह छ। Syuzanna Vieyra - एक लोकप्रिय र चिरपरिचित अभिनेत्री, प्रतिभा सार्वजनिक प्रेम जित्यो गर्ने। एक उनको सहभागिता साथ सबैभन्दा उल्लेखनीय फिलिमहरु को - "हावा मा किला" (टी वी श्रृंखला)। यसलाई मा अभिनेता बस ठूलो, प्रतिभाशाली।
Syuzanna Vieyra fantastically भूमिका लिन्छ: Gonzalo स्पष्ट र खुला गरियो। त्यो - राम्रो आमा, एक असल मित्र, एक ध्यान साथी, जीवन को एक विश्वासी साथी।
एलिजाबेथ मनटाना - श्रृंखला को एक वास्तविक धन। धेरै दर्शकहरु सुरुमा बस किनभने यो आफ्नो मनपर्ने अभिनेत्री खिच्नुभयो थियो एउटा चलचित्र हेर्न थालें। श्रृंखला लागि vivian Pazhmanter धेरै सम्झना हुनेछ "प्रेम को नाम मा।" यस मामला मा, तथापि, उनको चरित्र - चाहने दोस्रो छोरी Otavio मनटाना, राम्रो तरिकाले विवाह, र यसैले एक शानदार पार्टीको लागि खोज चिन्तित गर्न। के उनको विचार को आउनेछ जसले चासो श्रृंखला हेर्नुहोस् हुनेछ कसैले भेट्टाउनुहुन्छ।
तसर्थ, "हावा मा किला" - माथि र फेरि पुनर्विचार गर्न चाहनुहुन्छ कि केही चलचित्रहरू मध्ये एक। जीवन्त अक्षरहरू, स्मरणीय, तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै व्यक्तित्व छ।
उचाइ Dzhonni Deppa: कसरी महत्त्वपूर्ण यो एक अभिनेता लागि हो
"Showgirls": अभिनेता र आफ्नो करियर
दबाना र एमआरआई
किन खतना गर्न
म निःशुल्क क्रेडिट इतिहास कसरी पाउँछौं?
जहाँ र कुनामा टाइल लागि प्रयोग कसरी
अन्तर्राष्ट्रिय intergovernmental संगठनहरूको
कम्पास - आनन्द मा एक टाटु
के तपाईं बढ्न छिटो आफ्नो कपाल गर्न के गर्नुपर्छ?